Frequency miova Drive, miova Frequency Inverter, Frequency Inverter - Simphoenix
Industrial fanaraha-maso ny vokatra
Servo sy ny fanaraha-maso mihetsika
Taratasy ny fikasana (Loi)
Miorina amin'ny fototra mafy ara-teknika,
dia mamaritra matetika inverter araka ny an'izao tontolo izao-kilasy voalohany fenitra.
Fa ny fanavaozana ny ORINASA MPANAMBOATRA,
Simphoenix manomana vahaolana simba ny servo mihetsika fanaraha-maso ho an'ny mpanjifa.
Fanaraha-maso ny orinasa dia manolotra purduct
misy plc sy HMI mba hanomezana fahafaham-po ny filàna ny mpanjifa amin'ny orinasa automatique.
CA100 series servo fiara
E500 andian-dahatsoratra mini-As karazana fiara
E280 andian-dahatsoratra ankapobeny vectorielle As fiara
Shenzhen Simphoenix Electric Teknolojia Co., Ltd dia fanjakana-tsy miankina nahazo fankatoavana teknolojia avo-toeram-piasana ary koa ny rindrambaiko orinasa ankatoavin'ny Shenzhen Siansa sy Information Bureau. Niorina tamin'ny taona 2004, indrindra indrindra Simphoenix no anjara ao amin'ny R & D, famokarana, barotra sy ny fanaraha-maso ny fanompoana ao indostria vokatra. Main vokatra manarona inverter, servo mpamily, PMSM, plc, HMI, sns Amin'izao fotoana izao, Simphoenix manana mihoatra ny telon-jato mpiasa sy ny varotra Network manarona firenena manontolo sy ny hafa firenena mihoatra ny 60 sy ny faritra.
Hijery ny More Raiso amin ny
Simphoenix dia hanatrika ny fampiratiana ITES Shenzhen Industrial Mar-19-2021
Address: Building A, Huichao Industrial Park, 2 daty Rd ny Gushu, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Sina